कु’टिए पुन्य गौतम ! – Khabarhouse
कु’टिए पुन्य गौतम !
Khabar house | २४ माघ २०७६, शुक्रबार ०५:१९ | Comments
काठमान्डौ : आफुलाई राजनीतिक विष्लेषक भन्दै आएका पुष्य गौतम कु’टिएका छन । एक पि’डितलाई गरिएको सहयोग हिनामिना गरेको आ’रोप लागेका गौतम अर्का समाज सेबी बिनय जंग बस्नेत द्वारा कु’टिएका हुन् । पैसा हिनामिना गरेको बिषयमा छलफल गर्दै गर्दा बिनायाजंगले पनि १ लाख खायो भन्छन नि भने पछी उनि माथि हा’तपात गरेका हुन् ।
२०३४ सालमा बाराको निजगढमा आमा हिमादेवी र बाबु रुद्रप्रसाद गौतमको कान्छो छोराको रुपमा जन्मिएका हुन् पुण्य प्रसाद गौतम । खेतको काम, दाउरा, घाँस, मेलापात गर्दै सामान्य मान्छेसरह बाल्यकाल बिताएका उनी गाउँका सुखदुःखको भोगाइ भोग्दै यहाँ सम्म आइपुगेका हुन् । सानै उमेरदेखि पढ्न मन गर्ने स्वभावका गौतम पढाइमा सधैँ प्रथम हुन्थे । पढ्न जान्ने भएकाले उनलाई प्रायः सबैले चिन्थे ।
स्कुलमा हुने विविध कार्यक्रम, हाजिरी जवाफ कविता वाचनलगायतका कार्यक्रममा उनी सधैँ भाग लिन्थे र स्थान पनि हात पार्थे । त्यस्तै भाषण गर्ने काममा उनी सधैँ अरुको रोजाइमा पर्ने गरेको सुनाउँछन् । भाषण देख्नेले त उनलाई नेताकै पगरी गुथाइदिन्थे। त्यही भएर होला उनलाई आफ्नो जन्म नै राजनीतिका लागि भएजस्तो लाग्छ ।गौतमको राजनीतिक जीवन २०४५ सालबाट अनेरास्ववियुको स्कुल इकाइ कमिटीमा आबद्ध भएर काम गर्नथालेपछि सुरु भएको हो । राम्रो र कडा स्वभावका उनले सानो छँदै कार्यक्रम उद्घोष ण गर्ने, राम्रो भाषण गर्ने कला सिकिसकेका थिए ।